Ungayiqalisa Kanjani Isiza se-WordPress Esenzelwe Ukucinga | Martech Zone
Ungayiqalisa Kanjani Isiza se-WordPress Esenzelwe Ukucinga
NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 2, 2019 NgoLwesithathu, Februwari 6, 2019 Douglas Karr
As I-WordPress iyaqhubeka nokuthwebula i-markethare yamabhizinisi, siyaqhubeka nokuthola izicelo eziningi ezivela kumabhizinisi amakhulu anamasayithi amahle aklanyelwe ukumaketha okumangazayo nezinkampani zokuklama imidwebo - kepha awanakho ukusebenziseka okudingekayo ukuthinta imiphumela yosesho lwe-organic. Ngaphambi kokuthi sisebenzele amasu wokuqukethwe wamakhasimende ethu, siqala ngokubasiza ngokusebenziseka okuhle. Akukho ukusetshenziswa okuningi kokutshala imali kokuqukethwe kwe-premium uma isayithi lakho lingatholakali!
WP Shrug, Inkampani yezinsizakalo ezeseka i-WordPress, ihlanganise uhlu oluphelele futhi yalushicilela kule infographic ekulula ukuyifunda. Sisize amakhulukhulu ezinkampani ngokusebenzisa i-WordPress esebenza kahle ngakho-ke angithengiswa nge-100% ohlwini lwazo (imibono engezansi), kepha ngiyaqiniseka ukuthi ukulandela le infographic kuzokutholela ngokuphelele i-99% yalapho!
Uzodinga ukusungula iwebhusayithi yakho ngesisekelo esihle. Ungazinika isiqalo ngokusebenzisa izeluleko eziphezulu zokuqalisa ze-10 WordPress zemiphumela emihle ye-SEO.
Ungasisebenzisa kanjani iSayithi elisha le-WordPress
Iwebhusayithi yokusingatha - esinye sezizathu zokuthi kungani sathuthela futhi sathanda iFlywheel ijubane lezimo zabo ezibonakalayo nokulondolozwa kwesikhashana. Abaphathi be-WordPress abaphethwe bakhiwe ngokukhethekile ekusebenzeni kwe-WordPress futhi ngeke bakudukise ekusekelweni njengoba kwenza abaphathi abajwayelekile.
CDN - Uma umphathi wakho enganikeli ngefayela le- inethiwekhi yokulethwa kokuqukethwe, ukungeza eyodwa kufanele kube yinto eza kuqala. Ama-CDN azosiza amafa wakho we-static wewebhusayithi alayishe ngokushesha okukhulu futhi asebenzise ubuchwepheshe besiphequluli namanethiwekhi wezwe ukukhulisa isivinini sakho sesayithi.
I-SEO Friendly Theme - Isakhiwo sekhasi nokuklanywa kwengqikimba zigxeka ngokuphelele uma kukhulunywa ngokwethula izinjini zokusesha ngekhasi elihle. Umaki we-HTML5, ukwakheka kwekhasi, ukuzulazula, nezinye izinto konke kunomthelela ekutheni itimu yakho ikubeka kahle kangakanani okuqukethwe kwakho ukusesha abakhasi bese usebenzisa ama-algorithm.
I-Caching - Futhi, abahlinzeki abaningi be-WordPress abaphethwe banikela ngendlela enamandla yokulondolozwa kwesikhashana. Uma ungenayo eyodwa, ungabhalisela i-plugin e-caching esekelwa kahle futhi elula, I-WP Rocket.
Izigaba - Hawu, Angiyena umlandeli wezigaba ezingenazo izinkomba. Ngikholwa ukuthi izigaba zibalulekile ekwethuleni isikhundla sabaphathi besayithi lakho ezinjinini zokucinga futhi sinamakhasi esigaba abeka imigomo ebanzi ukuthi amakhasi azimele ngeke abe sethubeni lawo. Ngijwayele ukukhipha amakhasi wamathegi e-noindex, noma kunjalo.
Amathegi - We tags noindex futhi ungashicileli omaki be-meta element ezingqikithini zethu. KODWA, simaka ngokuphelele ukukhwabanisa kukho konke okuthunyelwe esikushicilelayo! Kungani? Izivakashi zethu eziningi zisebenzisa usesho lwethu lwangaphakathi ukuthola ama-athikili - futhi ukumaka lezo zihloko kuqinisekisa ukuthi ziyatholakala.
permalinks - A kahle i-slug ne-permalink elungiselelwe ku-athikili kungakuqinisekisa ukubonakala kokuthunyelwe kwakho namakhasi wakho ekusesheni futhi kuthathe ukunakwa kwesisheli ekhasini lemiphumela yenjini yokusesha. Sizama ukugcina ama-permalinks efushane ngangokunokwenzeka kanye ne-post slug ngaphakathi kwegama elilodwa kuya kwele-1, sikhipha noma yimiphi imigomo engadingekile.
Amazwana Ogaxekile - Ngenkathi izixhumanisi ezingenalutho zinikezwa yi-WordPress, ukuvula imibono ukuthi ishicilelwe ngaphandle kwemvume kuzoguqula isayithi lakho le-WordPress libe yimboni ye-SPAM. Akugcini lapho, benza ingxoxo esizeni sakho ibonakale ingasebenzi… ungabavumeli!
Izihloko Nezincazelo ZeMeta - Sisebenza kanzima ezihlokweni zethu nasezincazelweni zemeta ukuzilungiselela ukuseshwa. Khumbula, isihloko sakho siyinto ebaluleke kakhulu ekhasini ne incazelo meta impikiswano evumayo yokuthi kungani umuntu oseshayo kufanele achofoze isixhumanisi sakho kumphumela wenjini yokusesha. Kufanele usebenze kanzima ezihlokweni zakho nasezincazelweni ze-meta njengoba wenza kokuqukethwe kwakho!
I-XML Sitemaps - Wake wazama ukuthola indawo entsha ngaphandle kwezikhombisi-ndlela? Yebo, imephu yakho yesayithi yeXML inikeza izikhombisi-ndlela ezinjini zokucinga lapho okuqukethwe kwakho kutholakala khona, kubaluleke kangakanani nokuthi kugcine ukubuyekezwa nini. Yonke indawo kufanele ube nemephu yesayithi yeXML! Ngingancoma futhi ukukhomba eyakho imephu yesayithi kufayela lakho le-robots.txt.
Ukube bengizoguqula uhlu, ngingahle ngisuse isigaba kanye nezeluleko zethegi bese ngifaka okulandelayo:
Ukuphakanyiswa Komphakathi - Isikhundla samasayithi ngokuya ngokuthandwa. Ukuze utholakale, kufanele uxhumeke ku-. Ukuze ukwazi ukuxhunyaniswa, kufanele ukhushulelwe esikhundleni. Ukuhlanganisa izinkinobho zokushicilela komphakathi nezokwabelana komphakathi kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi okuqukethwe kwakho kwabelwana ngakho futhi kuthuthukiswa ngempumelelo ku-inthanethi.
Abaphathi beWebhu - Ukwethula noma yiliphi isayithi le-WordPress ngaphandle kokulibhalisa kuma-Webmasters nokukhomba imephu yakho ye-XML Sitepap kusho ukuthi awuqinisekisi ukuthi isayithi lakho liyatholakala futhi likhonjisiwe. Abaphathi beWebhu bazophinda bakhombe izinkinga ngesayithi lakho ezikuvimbela ukuthi ukleliswe kahle. Lungisa lezo zinkinga futhi uzolinganisa kahle!
Ukuphendula Kwamaselula - Ingxenye yazo zonke ithrafikhi yokusesha isiyiselula futhi iGoogle iyathanda ukwakhiwa kwewebhu okuphendulayo. Ngaphandle kokulungiselelwa iselula, awulungiselelwe ukuseshwa!
Ukuzikhulula: Ngisebenzisa izixhumanisi ezihambisanayo kule ndatshana.
Tags: cacheinqolobanenokwenza isigabaCdnugaxekile wamazwanainethiwekhi yokulethwa kokuqukethweflywheelqalisa indawo ye-wordpressizincazelo zemetaumaki we-metaukuphendula kweselulakuvumelekileiposi slugseoingqikithi enobungane ye-seoingqikithi ye-seoisihloko se-seoslugizinkinobho zenhlaloukukhushulwa komphakathiukushicilela kwezenhlaloizinkinobho zokwabelana zenhlaloizinkinobho zokwabelana nabantuamazwana ogaxekileukwenziwa kwamathegiukusetshenziswa kwesihlokoisilondolozi se-wordpressizigaba ze-wordpressi-wordpress hostingukwethulwa kwe-wordpressUkusebenziseka kwe-wordpressi-wordpress permalinksamathegi we-wordpressrockp ye-wpxml amamephu esayithiyoast seo
Ungayisebenzisa Kanjani Idatha Yezinhloso Zomthengi ku-2019
Siza Ukuhola Ukuhlubuka Kwezentengiso
Jul 20, 2016 ku-10: 38 AM
I-CDN: Ngisebenzisa i-cloidflare CDN - kumahhala futhi kuyashesha. Ngingajabula kakhulu uma ungakhombisa ukuthi iyiphi oyincomayo.
Ukubamba - ngisebenzisa i-digitalocean - ukusingathwa okuhle impela, kepha udinga ukwazi ukuthi kuyini console nokuthi ungasebenza kanjani nakho. Kuleso simo uzoba nemiphumela emihle.
Imephu yesayithi yeXML - yebo! yizinto ezibaluleke kakhulu. Angikwazi ukuqonda abantu abakweqayo. Ungaba nokuxhumanisa okungalungile, kepha uma imephu yakho yesayithi yeXML ilungile - Uphezulu.
Kuthiwani ngamathegi ohlu lwezincwadi zeBhayibheli? Ingabe uyayisebenzisa? uma i-noindex yekhasi, njengamakhasi wamathegi, ingabe uyancoma ukuthi usebenzise amathegi we-canonical?
Jul 20, 2016 ngo-2: 40 PM
Sawubona Kottok, sincoma ngokuphelele amathegi we-canonical. Ngikholwa ukuthi i-WordPress manje iyabasekela njengengxenye yesikhulumi, ngakho-ke angenzi lutho olukhethekile. Ngisebenzisa ama-plugins we-Yoast's SEO futhi ngingawaguqula uma kudingeka.
Jul 29, 2016 ngo-2: 00 PM
Ngakwesokudla, i-wordpress support tag canonical futhi ngama-plugins manje sekulula kakhulu ukuyifaka 🙂 Ngiyawathanda ama-plugins
Ngiyabonga futhi ngendatshana yakho!